ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင် အခြေခံ သင်တန်း
Curriculum Overview Learning aspects Reviews
Chapter 1 : သင်တန်း မိတ်ဆက်ခြင်း
ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံပညာ သင်ယူခဲ့ပုံ
Chapter2: ကင်မရာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အကြောင်း
ဘယ် lens ဝယ်သင့်လဲ?
ဘယ် SD CARD အမျိုးအစား ဝယ်သင့်လဲ?
အခြား သော ကင်မရာ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများအကြောင်း
ဘယ် ကွန်ပြူတာ အမျိုးအစား ဝယ်သင့်လဲ?
သင့်ရဲ့ Camera နဲ့ Lens ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်သလဲ
Chapter3: ကင်မရာ technical ကြောင်း
DSLR သို့မဟုတ် Mirrorless ကင်မရာ အသုံးပြုပုံ
Mode Dials အကြောင်း
Aperture ဆိုတာ ဘာလဲ?
Shutter Speed ဆိုတာ ဘာလဲ?
Metering နဲ့ Histogram များအကြောင်း
Metering and Histogram (Version2)
အလင်းအမှောင် လက်တွေ့ ချိန် နည်း
White Balance ချိန်နည်း
Picture Style ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘယ် aspect ratio က အကောင်းဆုံး လဲ?
Focusing mode တွေ အကြောင်း
Megapixel ဆိုတာ များတိုင်း ကောင်း လား?
Sensor size တွေ အကြောင်း
Exposure Bracketing (BKT)
Chapter4: Composition ကောင်းကောင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း
ဓါတ်ပုံကောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ?
Color Theory အလွယ်အကူ
Photography အမျိုးအစားနှင့် lens ရွေးချယ်မှု
Astrophotography နှင့် Long Exposure အကြောင်း
Chapter5: Lighting အကြောင်းများ
Lighting အခြေခံ မိတ်ဆက်ခြင်း
Godox V860ii ကို trigger နှင့် ချိတ်နည်း
Godox AD200 နှင့် AD600 ကို trigger နဲ့ ချိတ်နည်း
Outdoor portrait မှာ lighting သုံးပြီးလက်တွေ့ ရိုက်နည်း
Indoor portrait မှာ lighting သုံးပြီးလက်တွေ့ ရိုက်နည်း
Chapter6: Lightroom အသုံးပြုပုံ
How to install PS and LR in Mac
ဓါတ်ပုံများ Import သွင်းနည်း
ဓါတ်ပုံများ Organize လုပ်နည်း
Basic adjustment များ အကြောင်း
Tone Curves အလွယ်အကူ
HSL ဖြင့် ဓါတ်ပုံ ကာလာ ချိန်နည်း
Split-Toning & Color Calibration များ အကြောင်း
Local adjustment ဖြင့် ဓါတ်ပုံများ ပို ကောင်းအောင် ပြင်နည်း
ဓါတ်ပုံမှာ မလိုချင်သောအရာများ ဖျောက်နည်း
HDR Edit လုပ်နည်း
Portrait ဓါတ်ပုံ retouching လုပ်နည်း
ကျွန်တော်် အကြိုက်ဆုံး landscape တစ်ပုံ ပြင်နည်း workflow အပြည့်အစုံ
How to adjust your Histogram and Exposure
Chapter7: Experiences Sharing
Dos and Don'ts asaPhotographer
ကင်မရာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အကြောင်း
ကင်မရာ technical ကြောင်း
Composition ကောင်းကောင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း
About your opinion here
Thet Naing Swe (28/07/2020)
ရှင်းလင်းချက်တွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ပေးရတာထက် ပိုတန်တဲ့ သင်တန်းပါ
YE Thiha (15/08/2020)
Wai Yan (15/08/2020)
အပိုင်း (၁) - Chapter 1 to 10
Life Winning Management Program
ရုပ်သံကြော်ငြာဗီဒီယိုများ စီစဉ်ဖန်တီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ Online သင်ခန်းစာများ